थाहापाउनुहोस् : यस्तो छ मानिसले चुम्बन गर्न सुरु गर्नुका कारण ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
थाहापाउनुहोस् : यस्तो छ मानिसले चुम्बन गर्न सुरु गर्नुका कारण !
चुम्बन अहिलेको मानिसमा साधरण कुरा भइसक्यो । तर पहिले मानिसले किन चुम्बन गर्न सुरु गरे भनेर अनुसन्धान भएको छ । संसारभरीका १६८ संस्कृतिको अनुसन्धान गर्दा आधाभन्दा कम समुदायमा मात्रै अधरमा चुम्बन गर्ने प्रचलन रहेको भेटियो ।
यहाँ यस्ता दुई सिद्धान्तबारे कुरा गरिएको छ जसमा मानिसहरुलाई चुम्बनको किन आवश्यकता पर्यो भन्ने बारे चर्चा गरिएको छ । एक बच्चाको रुपमा हामीलाई जन्मजात रुपमै ओठ छुन मनपर्छ ।
पहिलो सिद्धान्त यो हुनसक्छ कि हामीले ओठ छुने कुरालाई स्तनपानसँग जोडेर हेर्छौं । र यो गुण सबैमा जन्मजात नै हुन्छ । यस्तै, आमा र शिशुबीच हुने ‘प्रिमेस्टिकेसन फुड ट्रान्सफर’ का कारण पनि आमा र बच्चाबीच ओठमा चुम्बन गर्ने प्रचलन बढेको र एक किमिसमको गहिरो सम्बन्ध स्थापित भयो ।
पुरानो समयमा हाम्रा पूर्वज आमाहरुले हामी सानो छँदा खानेकुरा चपाएर सिधै हाम्रो मुखमा हालिदिएको हुनसक्छ । यही प्रक्रिया हाम्रो नजिकका पूर्वज चिम्पाञ्जीलगायत अन्य ठूला बाँदरमा पनि देखियो ।
मेलिसा होगेनबूमले सन् २०१५ मा बीबीसी अर्थका लागि यो प्रश्नको जवाफ दिएकी थिइन् । हामी आफ्नो पार्टनरको निकै नजिक भएर उनीहरुलाई मिठो गन्ध दिन चाहने भएकोले पनि निकै नजिक हुन बाध्य भएको हुनुपर्छ ।
गन्धले सबै प्रकारको उपयोगी जानकारी प्रकट गर्न सक्छ । नाम नै लिनुपर्दा आहार, रोगको उपस्थिति, मनोदशा केही हुनसक्छन् । थुप्रै जनावरमा गन्धको विषयमा हामीभन्दा थुप्रै गुणा राम्रो इन्द्रिय हुन्छ, त्यसैले उनीहरु त्यति नजिक पनि हुनुपर्दैन ।’ एजेन्सी
प्रकाशित मिति: Aug 31, 2021
चिकेन बर्गर महिलाले खाँदा पहिलो गाँसमै मान्छेको औंला भेटिएपछि…!
न्यूयोर्क पोस्टको रिपोर्ट अनुसार बोलिभियामा बस्ने इस्टेफनी बेनिटेज एक फास्ट फूड रेष्टुरेन्टमा बर्गर खान गएकी
भोकमरीको कारण बाबुले चार वर्षकी छोरीलाई बिक्रिमा राखेपछि…!
मानिसको भविश्य कस्तो हुन्छ कस्ले जानेको हुन्छ । कुन समयमा के घटना घट्छ अनि कस्तो
प्राय मानिसले खुसीको अवसरमा उपहार दिने गर्छन् । उपहार समान्यतया मानिसलाई सम्झनाको लागि दिने गरिन्छ
नाग मारेपछि नागिनले आतंक मच्चाउँदा एक जनाको मृत्यु, २५ जना घाइते !
काहानीमा भन्ने गरिन्छ यदी कसैले नाग मार्यो भने त्यसको अगिनाको खरानी पनि नष्ट हुन्छ र
आफ्नो श्रीमान्लाई उत्तेजित पार्न छिमेकीले भित्री वस्त्र सुकाएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि…!
यो संसारमा अचम्मको घटना हुने गर्छन् त्यसैले त भन्ने गरिन्छ यो संसार विचित्रको छ ।
गाउँका मुखियालाई गधा चढाएर आर्यघाट पठाएपछि…!
छिमेकी देश भारतको मध्य प्रदेशको रतलाम जिल्लामा पानी नपरेपछि गाउँलेहरु चिन्तित छन् । यहीबीच नामली